Barcelona Oo Isku-dayday Inay Fashiliso Heshiiskii Arsenal Iyo Aubemeyang & Waji Gabaxa Ay Kula Kulantay Ficilkaas – Laacibnet.net
Barcelona Oo Isku-dayday Inay Fashiliso Heshiiskii Arsenal Iyo Aubemeyang & Waji Gabaxa Ay Kula Kulantay Ficilkaas
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa Salaasadii isku dayday inay dhexda u gasho oo ay fashiliso heshiiskii ay Arsenal la gashay weeraryahanka reer Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang oo saddex sannadood oo kale ku kordhiyey heshiiskiisii hore oo sannadkii ugu dambeeyey uu u socday.
Pierre-Emerick Aubameyang ayaa qalinka ku duugay heshiis saddex sannadood ah oo ka dhigaya ciyaartoyga ugu mushaharka badan horyaalka Premier League, waxaanu u xaadirayaa toddobaadkii lacag dhan £350,000 Gini, isaga oo ka sare maray Ozil.
Barcelona oo liiska ciyaartoyda ay doonayso ku darsatay Pierre-Emerick Aubameyang ayaa dalab ka gudbisay weeraryahankan, sida uu sheegay telefishanka Sky Sports, laakiin waxa kasoo gaadhay waji gabax kaddib markii ay Arsenal dhegaha ka furaysatay, sidoo kalena uu Aubameyang doorbiday inuu Emirates Stadium kusii negaado saddex sannadood oo kale.
Tababare Ronald Koeman ayaa doonaya in safkiisa uu kusoo kordhiya weeraryahan cusub oo beddel u noqda Luis Suarez oo da’diisu weynaatay, balse waxa hadda si rasmi ah uga baxay liiskaas weeraryahanka reer Gabon.
Sky Sports waxa kale oo uu sheegay in kooxda Talyaaniga ah ee Inter Milan ay dhinacooda doonayeen Aubameyang oo xili ciyaareed wanaagsan ku qaatay Premier League inkasta oo Arsenal uu siin kari waayey fursad ay kaga soo qayb gasho Champions League, taas beddelkeeda ay Europa League ka ciyaari doonaan.
31 jirkan ayay Arsenal walaac weyn ka qabtay inay sii haysan karayso marka uu dhamaado xili ciyaareedkan maadaama uu qandaraaskiisu ku ekaa June 2021, balse waxay hadda walaac la’aan ka yihiin mustaqbalkiisa oo ay iyagu gacanta ku hayaan illaa inta ay da’diisu 34 jir noqonayso.
Xili ciyaareedkii tegay ayuu Pierre-Emerick Aubameyang horyaalka Premier League ka dhaliyey 22 gool, waxaana uu fasalkan cusub furtay xisaabtiisa gool dhalinta isaga oo shabaqa soo taabtay kulankii Fulham ay ku garaaceen 3-0 ciyaartii ugu horreysay ee Premier League.